Khilaafka Doorashada Somalia, Farigelinta Beesha caalamka iyo maqnaanshaha laba Maamul
Home WARARKA Khilaafka Doorashada Somalia, Farigelinta Beesha caalamka iyo maqnaanshaha laba Maamul
Muqdisho-(Berberanews)-Raysal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la yeeshay xubno ka tirsan wakiillada beesha caalamka iyagoo ka wadahadlay arrimo la xidhiidh dardar galinta iyo dhameys tirka doorashooyinka daka Soomaaliya.
Wadahadalladaan dhexmaray qaar ka mid ah wakiillada beesha caalamka iyo raysal wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay bogga facebook ee xafiiska raysal wasarae Rooble.
Waxaa sidoo kale kulankaan la iskula soo qaaday soo jeedintii guddigii farsamada ee magaalada Baydhabo ku kulmay bishii Febraayo isla markaana soo saaray qodobbo gogal xaadh u ahaa kulan dhex mari lahaa madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goballeedyada oo dhan iyo gobalka Banaadir .
Baaqa Somalia u dirta maamullada Puntland iyo Jubaland.
“Waxaan mar kale u xaqiijinnay shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka in Dowladda Federaalka Soomaaliya diyaar u tahay doorasho dalka ka dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan,si waafaqsan heshiisyadii doorashada la xiriiray ee horay loo gaaray, wadahadalna lagu xalliyo madmadowga jira” ayuu yidhi Raysal wasaare Rooble.
Dolwadda Soomaaliya ayaa mar kale ugu baaqaday madaxda Maamul Goballeedyada ee ka maqan Shirka Wadatashiga Qaran ee arrimamaha doorashooyinku in ay ku soo biiraan, si arrimaha lagu kala duwan yahay loogu xalliyo miiska wada hadalka, dalkana ay uga qabsoonto doorasho daahfuran.
Hadalkaan ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa imaanaya xili ay jirto kala aragti duwanaan ba’an oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka.
Farigelinta Beesha caalamka
iyo maqnaanshaha laba Maamul
Previous articleBerbera: Aas qaran oo loo sameeyay Chief Caaqil Saleeban Maxamed Cigaal
Next articleCirro oo loo cumaamaday musharraxa Waddani ee doorashada Madaxtooyada 2022